Banyere Anyị - Jinyun ọla Co., Ltd.
Jinyun ọla e hiwere na 2006. Anyị ụlọ ọrụ dị na Guangzhou, China. Anyị na-pụrụ iche na igwe anaghị agba nchara ọla N'ogbe site B2B na ndidi na ihe karịrị 10 afọ nke azụmahịa na a akara. N'ihi ya, anya, anyị na e kwenyere na ihe karịrị 300 suppliers kemgbe ahụ na inwe ọtụtụ adaba ugwo ụzọ, kacha mma ahịa na ọrụ anyị ahịa.
E nwere ihe karịrị 100,000 dị iche iche na aghụghọ na ị pụrụ ịhụ site na anyị website, www.julongsteeljewelry.com . All ndị ọhụrụ ụdị ga-emelitere site n'izu ọ bụla maka banyere karịa 2000pcs ọhụrụ ngwaahịa. Products aghụghọ dịgasị iche iche ndị dị nnọọ ọtụtụ ebe na ike n'ụzọ zuru ezu afọ ju ọtụtụ dị iche iche ahịa si mba dị iche iche 'mkpa.
Anyị nwere ihe karịrị 10,000 edebanyere so na-site n'ụwa nile, ha ga-ejikarị eme mgbe nile iji na-re-na-na ngwaahịa nke ga-eme ka ha ọtụtụ adaba ebe ọ bụ na anyị na ndị ahịa na mkpa banyere 3-15 ụbọchị na-enweta ngwá ahịa ha. Anyị na-enye nnọọ ala na-eri ihe na ngwa na-adaba adaba ugwo ụzọ, dị ka Ṅaa-PAL, Bank nyefe, Western n'otu na Money gram.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko egbula kpọtụrụ anyị.